နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်လွန်ခဲ့သော်လည်း စစ်ကျန် အမေရိကန်ဗုံးများက ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးများအား ခြိမ်းခြောက်နေဆဲဖြစ် - Xinhua News Agency
ဖနွမ်းပင်၊ မေ ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
Yan Sam En သည် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်း Chetr Boreiခရိုင်က လယ်သမားတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်က တစ်နေ့တွင် ကလေး ၅ ဦး၏ဖခင်ဖြစ်သူ Yan Sam En သည် ၎င်း၏အိမ်အနီးတောထဲတွင်အလုပ်လုပ်နေစဉ် cluster bombs ဗုံးသီး ၄ လုံးတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့မှာ ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက ယင်းဒေသကို အမေရိကန် မြေလှန်ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်စဉ် မပေါက်ကွဲဘဲ ကျန်ရစ်နေသော စစ်ကျန်ဗုံးသီးများ ဖြစ်သည်။အသုံးမကျသောသူ တစ်ဦး အဖြစ်သို့ “ကျွန်တော့်ကလေးတွေကို ဒီဗုံးတွေနဲ့ မဆော့ကစားစေချင်ဘူး၊ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်လည်း ကောက်ပြီး စုထားလိုက်တယ်၊ အဲလို လုပ်နေစဉ်မှာပဲ ဗုံးတစ်လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တာ… လက်မောင်းတစ်စုံလုံး ပြုတ်ထွက်သွားပြီး မျက်စိလုံးဝကွယ်သွားတယ်”ဟု Sam Enက ဆင်ဟွာကို သောကြာနေ့က ပြောသည်။
“ကျွန်တော့်အသက် ၄၃ နှစ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာ၊ ခုဆို ကျွန်တော် ၆၁ နှစ်ရှိပြီ၊ ဒါပေမဲ့ အချိန်တွေက မကုစားနိုင်ခဲ့ပါဘူး ”ဟု ၎င်းဆိုသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့ ၌ကျင်းပသည့်အခမ်းအနားတစ်ခုတွင် စစ်ကျန်အမေရိကန်ဗုံးနှင့်အခြားသော လက်နက်ခဲယမ်းများအား ပြသထားသည်ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၂၀ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဗုံးဒဏ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း သူသည် သူ့မိသားစု၏ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်သွားပြီး သူဘာမှ မလုပ်ကိုင်နိုင်တော့ကြောင်း ၊“အမေရိကန်က ကျွန်တော့်ရဲ့အရာအားလုံးကို လုယူသွားတယ်၊ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ မိသားစုကို ရှာဖွေကျွေးမွေးနေတဲ့သူကနေ အသုံးမကျတဲ့သူ ဖြစ်သွားတယ် “ဟု Sam Enက ပြောသည်။
Sam En၏ မျက်လုံးနှင့်လက်မောင်းတစ်စုံကို ဆုံးရှုံးစေသည့် ယင်းဗုံးသီးများက အမေရိကန်-ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲအတွင်း ကမ္ဘောဒီးယားသို့ ကြဲချသည့် မရေမတွက်နိုင်သော ဗုံးများနှင့် မရေတွက်နိုင်သော ခြေလက်မျက်စိ ဆုံးရှုံးသူများ၊ ထောင်နှင့်ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများကို ပြန်လည်အမှတ်ရစေသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ကန်ဒယ်ပြည်နယ် မြစ်ကြမ်းခင်းတွင် တွေ့ရှိရသော စစ်ကျန်အမေရိကန် ဗုံးသီးအား ၂၀၁၅ ခုနှစ် မေ ၂၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
၁၉၆၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၃ ခုနှစ်အတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံက ကမ္ဘောဒီးယားတွင် ကြဲချခဲ့သော ဗုံးပေါင်း ၂၃၀,၅၁၆ လုံး ရှိသည်။ ဧပြီ တစ်လတည်းမှာပင် ပေါင်ချိန် ၅၀၀ခန့် ရှိ အမေရိကန် Mk82 ဗုံးအမျိုးအစား အနည်းဆုံး ၅ လုံးကို နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် တွေ့ရှိခဲ့သလို မေ ၅ ရက်တွင်လည်း ကမ္ဘောဒီးယား ဗုံးရှင်းလင်းရေးအဖွဲ့က ဖနွမ်းပင်မြို့ နန်းတော်တစ်ဖက်ရှိ Chaktomukမြစ်တွင် ပေါင်ချိန် ၂,၀၀၀ ကျော် လေးသည့် အမေရိကန် ဗုံးကြီးတစ်လုံးကို ဘေးကင်းစွာ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
“အဲဒီတုန်းက အမေရိကန် စစ်လေယာဉ်တွေ နေရာတကာမှာ ပျံဝဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်၊ သူတို့က ဗုံးတွေကြဲပြီး လမ်းတံတားတွေကို ဖြတ်တောက်ပစ်တယ်”၊”ကျွန်တော်တို့ နေ့တိုင်း အကြောက်တရားနဲ့နေနေရတယ်၊ စစ်လေယာဉ်သံကြားရင် ကမန်းကတန်း ကတုတ်ကျင်းထဲ့ ပြေးပုန်းရတယ်”ဟု Sam Enက သူ့အတွေ့အကြုံများကို ပြောသည်။စစ်ကျန်ဗုံးများကြောင့် သူ့လို ထိခိုက်နစ်နာသွားရသူများအတွက် အမေရိကန်က ဘာထောက်ပံ့မှုမျှမပေးခဲ့ကြောင်း Sam Enက ဆိုသည်။
“ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်၍ မကြေညာထားသော စစ်ပွဲ”
ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ် ဟွန်ဆန် ရေးသားသော 《၁၀နှစ်တာ ကမ္ဘောဒီးယားခရီးစဉ်(၁၉၇၉-၁၉၈၉)》တွင် “ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်၍ မကြေညာထားသော စစ်ပွဲ”၏ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အရပ်သားသောင်းနှင့်ချီ သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် အမေရိကန်-ဗီယက်နမ် စစ်ပွဲနှင့် ပြည်တွင်းပဋိပက္ခများကျန်ရစ်ခဲ့သည့် အမွေအနှစ်ဒဏ်ကို ခံစားနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘောဒီးယား မြေမြှုပ်မိုင်းရှင်းလင်းရေးနှင့် မိုင်းဒဏ်သင့်သူများအား ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့(CMAA)၏ ပထမ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ Ly Thuchက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒီက မြေပြင်၊ မြေအောက်နဲ့ ရေထဲတွေမှာပါ ဗုံးတွေအများကြီး ပြန့်ကျဲပြီးရှိနေတယ်၊ ဒါတောင် ရေအောက်ကဗုံးတွေကို ကျွန်တော်တို့ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရှာဖွေတာတွေ မလုပ်သေးပါဘူး”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းတွေက စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေတဲ့ အန္တရာယ်တွေပါ။ ကျေးရွာတွေ၊ လယ်ယာမြေတွေနဲ့ စပါးခင်းတွေမှာ ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ စစ်ကျန်ပစ္စည်းများ ကျန်နေပါသေးတယ်၊ ဗုံးဒဏ်သင့်သွားတဲ့ နေရာက လယ်ယာတွေဟာ ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးလို့ မရ‌တော့ပါဘူး”ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက် ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖနွမ်းပင်မြို့ BELTEI International Universityရှိ Joseph Matthewsက အမေရိကန်ဗုံးများကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူ သို့မဟုတ် ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းခဲ့ရသူ အများအပြား ရှိကြောင်း ဆိုသည်။ CMAA၏အဆိုအရ ၁၉၇၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လအတွင်း မပေါက်ကွဲသေးသော စစ်ကျန်လက်နက်ခဲယမ်းနှင့် မြေမြှုပ်မိုင်းများကြောင့် ကမ္ဘောဒီးယားတွင်း သေဆုံးရသူ ၁၉,၈၁၆ ဦးနှင့်အခြား ဒဏ်ရာရရှိသူ ၄၅,၁၇၅ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။
“မပေါက်ကွဲရသေးတဲ့ လက်နက်ခဲယမ်းနှင့်မြေမြှုပ်မိုင်းများကြောင့် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူ သို့မဟုတ် ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့သူရဲ့ မိသားစုတွေ ခံစားရတဲ့ဒုက္ခတွေအတွက် ကျင့်ဝတ်အရရော ၊ ဥပဒေအရပါ အပြည့်အဝ တာဝန်ယူရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော် အခိုင်အမာ ယုံကြည်တယ်”ဟု Matthews ဆိုသည်။
Chhum Theaသည် ယခု အသက် ၆၂ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်က ကန်ပိုချန် ပြည်နယ်တွင် မိုင်းထိခြင်းကြောင့် ဘယ်ဘက်လက်မောင်း သူဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
“စစ်ကာလအတင်း ကျွန်တော်တို့ရဲကျေးရွာကို အမေရိကန်လေယာဉ်တွေဗုံးကြဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်၊ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး ငလျင်ပြင်းလှုပ်ခါနေအောင်ပေါ့”ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
“ဗုံးဒဏ်ကြောင့် အကြီးအကျယ်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ ကမ္ဘောဒီးယားကို အမေရိကန်က ကူညီရမယ်၊ ဘေးဒဏ်သင့်ခဲ့တဲ့ အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကို လျော်ကြေးပေးရမယ်၊ သူဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေကို သူကုစားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။（Xinhua）
PHNOM PENH, May 16 (Xinhua) — Yan Sam En isafarmer in northeast Cambodia’s Chetr Borei district. One day, almost 20 years ago, the father of five was working in the forest close to his home when he found four cluster bombs, unexploded remnants of the U.S. carpet bombing that devastated the area in the 1960s.
“I didn’t want my children to play with the bombs, so I collected them, and as I did, one exploded. It blew off both my arms, and left me totally blind,” Sam En told Xinhua on Friday. “I was 43 years old. I’m almost 61 now, but time has not healed me.”
Sam En says he has been nothing butaburden to his family since the blast. He cannot do anything. He just sits at home all day. “The U.S. deprived me of everything. Inafew seconds, I went from breadwinner to useless person.”
The cluster bombs that claimed Sam En’s eyes and arms are justareminder of countless bombs that the U.S. dropped on Cambodia during the U.S.-Vietnam War, claiming countless other arms, legs and eyes, and thousands of lives. Between 1965 and 1973, the U.S. dropped 230,516 bombs in Cambodia. In April alone, at least five U.S. Mk 82 bombs, weighing about 500 pounds each, were found across the country. On May 5,aCambodian bomb disposal team safely removedaU.S. bomb, weighing 2,000 pounds, from the Chaktomuk river opposite the Royal Palace in Phnom Penh.
“At that time, I saw U.S. warplanes flying around. They dropped bombs to cut off roads and bridges,” Sam En said. “We lived in fear every day and ran to hide in trenches when we heard the warplanes.”
‘VICIOUS, UNDECLARED WAR’
Cambodian Prime Minister Samdech Techo Hun Sen wrote in his book “10 Years of Cambodia’s Journey, 1979-1989” that the bombings killed “tens of thousands of civilians” ina“vicious, undeclared war”
Ly Thuch, first vice president of the Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority (CMAA), said Cambodia is still suffering from the huge legacy of the U.S.-Vietnam war and Cambodia’s own internal conflicts. “There arealot of bombs scattered on the ground, under the ground and in the water. We have not even conductedalarge-scale search for underwater bombs, yet,” he told Xinhua.
“Unexploded ordnance isaconstant danger. Villages, farmland and rice fields still contain explosive remnants of war and the affected land cannot be farmed,” he added.
“I strongly believe that the U.S. is morally responsible for the suffering of these people and ethically and legally bound to adequately compensate the families of those who had lost their lives or were maimed by these unexploded ordnance and landmines,” Matthews told Xinhua.
“U.S. planes bombed my village often during the war. The earth trembled as if it was an earthquake,” he told Xinhua.
The bombs caused huge destruction. The U.S. must help Cambodia and compensate the innocent victims. I want the U.S. to heal the wounds that it created.” ■
1. A war-left U.S. bomb is recovered fromariverbed in Kandal province, Cambodia, May 21, 2015. (Photo by Phearum/Xinhua)
2. The shells of war-left U.S. bombs and other munitions are displayed at an event in Phnom Penh, Cambodia, July 20, 2018. (Photo by Phearum/Xinhua)
3. A war-left U.S. bomb is recovered fromariverbed in Kandal province, Cambodia, May 21, 2015. (Photo by Phearum/Xinhua)